Waxyeellada ka timaadda 'formaldehyde' xad-dhaafka ah ee gogosha baabuurka
Waxyeellada ka timaadda jir-dhiska xad-dhaafka ah ee gogosha baabuurta Xogta ka soo baxday Maamulka Qaranka ee Badbaadada Wadooyinka ee Waddooyinka (NHTSA) waxay muujineysaa in shilalka taraafikada ee ka dhasha derbiyada baabuurtu ay aad u badan yihiin. Waa macquul in gogosha yar ee gawaarida sidoo kale ...
Xilligii cudurka faafa kadib, waxaad diirada saartaa isbedelka cusub ee darbiyada gawaarida Markii uu dilaacay COVID-19 sanadkii 2020 wuxuu magaalada ku qasbay inay riixdo badhanka hakadka Nolol guri dheer ka dib iyo warar aan la tirin karin oo ku saabsan la dagaallanka cudurka faafa, qof kastaaba wuxuu leeyahay fikir cusub ...
Shirkaddayadu waxay ku qaban doontaa Xarunta 16aad ee 'Automechanika Shanghai' Xarunta Qaranka iyo Xarunta Shirarka (Shanghai) laga bilaabo Diseembar 02 illaa 05, 2020 Aad baad ugu mahadsan tihiin taageerada joogtada ah ee aad siisaan shirkadeenna, Munaasabaddan awgeed, Changzhou Deao Vehicle Technology Co., Ltd. wou ...
Maxaad ugu adkeysaneysaa sameynta hal-cirbad cirbadeysan oo ka sameysan dharka TPE?
Shiinaha waligiis waxaa loogu yeeri jiray warshada aduunka. Iyadoo la hagaajinayo awoodda dhaqaale ee Shiinaha oo dhameystiran, awoodda ballaaran ee suuqa ayaa ka dhigtay suuqa Shiinaha inuu yahay mid u baahan calaamadaha caalamiga ah. Shirkadaha caalamiga ah iyo noocyada caalamiga ah ayaa ku deg degay ...
Waa maxay waxyaabaha TPE?
Hadda maadaama badeecooyinka TPE si ballaadhan loogu isticmaalay shaqadeenna iyo nolol maalmeedkeenna, sidoo kale waxaa la arki karaa in alaabada TPE ay si tartiib tartiib ah ugu noqdeen baahi nolosheenna, haddaba waa maxay aaladaha cayriin ee tpe? Sidee loo sameeyaa TPE? Laga soo bilaabo tan si loo fahmo: ...